SEO: Chii chinonzi Search Engine Optimization
Chii chinonzi Search Engine Optimization?
China, June 3, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ini ndango verenga paInc.com, WordPress yakagadziridzwa yeSEO. Ugh. Zvinoshungurudza kuti saiti yehunhu ihwohwo inopfuura pane zvisiri izvo seizvi.
WordPress yakagadziridzwa yeKutsvaga Injini Kugonesa.
Handizive kuti wakadii optimize yekugadzirisa kana izvo zvingatoreva. Sechinhu chemukati manejimendi manejimendi, WordPress inogonesa kukwidziridzwa, asi zviri kwazvo kwauri, yako WordPress theme uye yako WordPress plugins kunyatso gadzira yako saiti yeWebhusaiti kana blog.
Mune maonero angu ekuzvininipisa, pane zvinhu zvina kune yakasarudzika yekutsvaga injini optimization:
Kugonesa SEO yakanakisa maitiro vako chikwiriro, semarobhoti.txt, mapeni, uye XML sitemaps. WordPress haiti kuita chero izvi kunze kwebhokisi… iwe unozofanirwa kugadzira yako marobhoti.txt faira, gonesa pinging kune akakodzera masosi, uye wedzera a sitemap jenareta.
Kugadziridza dingindira rako, kuona peji zvinhu akaiswa zvakanaka uye saiti yakarongedzwa hierarchically, kuve nechokwadi chekuti mapeji anosimudzirwa nemazvo mukati. Vazhinji vanogadzira misoro vanofuratira kukosha kwezvinhu zvakaita semazita emapeji nemisoro. Vamwe vanogadzira iyo peji uye vanoisa barbar yepamberi pamberi peiyo peji yezvinyorwa mune dhizaini. Dingindira rakagadzirwa zvakanaka rinogona kuvandudza zvakanyanya mainjini ekutsvaga ekuona zvemukati uye nemazwi api avanonongedza zvemukati. Mabhizinesi mazhinji anotangisawo bhurogu uye haafungi maitiro ekuronga zvemukati zvakanyanyisa uye kuburikidza nekufamba kwavo. Izvi zvinogona kukonzeresa nyaya, kunyanya kana iwe uine rakasarudzika sarudzo yemazwi ekutsvaga.
Kugadziridza yako gutsikana kuburikidza nekushandisa mazwi akadzama izvo iwe zvaunoziva zvese zvinokwezva uye kushandura vashanyi kuva vatengi pane yako saiti. Izvi zvinoitwa sechikamu chehuwandu hweblogging package nemakambani akaita senge Kuwedzera, asi WordPress haina chero sevhisi kana maturusi ekuita izvi. Iwe uchazoda kuita ongororo iwe pachako uye shandisa chishandiso senge Munyori kubatsira (Munyori weiyo WordPress demo vhidhiyo).
Iko kusanzwisisika kweSEO ndechekuti zvizhinji zvezvaunoita pane ino saiti hazvinyatso kukanganisa chinzvimbo chako zvakanyanya sezvaunoita iwe off-saiti. Kunyora zvakanakisa, zvinehunhu zvemukati zvinowana kutariswa (uye backlinks) yemamwe masayiti zvinogona kukuwanisa iwe chinzvimbo mushe. Asi izvo hazvina kana chekuita neWordPress uye zvimwe zvine chekuita nekuti unosimudzira sei ako blog mablog, syndicate yako blog mumasocial media, uye uikurudzire kuburikidza nemakomendi uye nedzimwe nzira. Kunzwisisa kupi kwekusimudzira yako blog uye nekuisimudzira zvinobudirira kuchaita zvakanyanya kune yako yekutsvaga injini chinzvimbo pane yako chikuva!
Chekupedzisira, SEO iri kwete chiitiko chimwe chete, chekutarisa kana chirongwa. Sezvo vakwikwidzi vako (uye neInternet yese) iri kuramba ichichinja uye Google ichiramba ichigadzirisa maalgorithms ayo mazuva ese, chinzvimbo chako chinoramba chichichinja. Kunyoresa saiti yako neGoogle Search Console, Bing Webmasters uye Yahoo! Site Explorer, yekutarisa chinzvimbo nemidziyo senge Authority Labs uye Semrush chiitiko chichienderera mberi chaunoda kuisa kuti uve nechokwadi chekuti wakanyatsogadziriswa.
SEO ndiyo nzira yekutarisisa chinzvimbo chako uye kuita gadziriso inodiwa kuti uone kuti zvemukati zviri kuwanikwa uye zvinoratidzwa mushe zvemitemo inobatsira bhizinesi rako kukura.
Ndiyo tsananguro yangu!
Tags: Search Engine OptimizationTsvaga Kutengesaseochii ichocho
WordPress: Shambadza Ramangwana Zvinyorwa seZviitiko zvinotevera
Vatengi Sevhisi maringe neCustomer Rutsigiro
Jun 3, 2010 pa 7: 36 PM
Nhanho inotevera: Tora France!
Iwe unogona ndapota tipe isu muenzaniso wekupi kusimudzira yako blog?
Jun 3, 2010 pa 7: 58 PM
Kutaurisa pane anozivikanwa indasitiri blog mablog inzira yakanaka yekuwedzera mablog ako kusvika. Kubvumirana kuburikidza neTwitter (ine ma hashtag), Facebook uye Facebook mapeji (koka shamwari dzako uye kunyange kutanga Facebook Ad), uye kugadzirisa mamiriro paLinkedIn ine chinongedzo chekudzokera kuzvinyorwa inzira huru dzekusimudzira.
Jun 3, 2010 pa 8: 04 PM
Iwe unofamba here mune mamwe masocial network network? Squidoo? Reddit? Stumbleupon?
Jun 7, 2010 pa 10: 00 PM
Kwakanakisa kuongorora. Kana ini ndikanzwa kana kuona "SEO optimization" imwezve imwe nguva, ndiri gonna kurasikirwa nayo! Ndanga ndiri neThesis pane yangu bhurogu kwechinguva, uye inoita basa rayo (asi ini handina kuzvienzanisa nemitambo inokwikwidza). Ndanzwa zvinhu zvakawanda zvakanaka pamusoro peMunyori, saka ndichafanirwa kuzvitarisa izvozvi kuti wakurudzirawo, Ini ndichangotanga kushandisa Raven ye SERP yekutevera (ndiyo imwe pet pet peeve, huya kuzotaura nezvayo: Kana vanhu vakanyora "SERP mhedzisiro") uye ini ndiri kuchida.
Hapana chimwe chezvinhu izvi chiri SEO goridhe pachayo. Iko hakuna mhinduro iri nyore, sezvaunongedzera. Isu tinofanirwa kugara pamusoro payo, tobatsirana kana zvichibvira, uye nekukumbira maturusi anogadzirisa nyaya dzatinonongedza.